Ahena, ampiasaina indray ary avereno ampiasaina ny fihinanana maharitra | Bezzia
Maria vazquez | | an-trano
Tombanana ho any Espana dia miteraka fako 459 kilao isan-taona ny olona tsirairay. Tarehimarika iray izay tokony hahatonga antsika hisaintsaina ny momba antsika ny fahazarana. Ny fanjifana amin'ny fomba maharitra dia azon'ny tsirairay atao ary anio ao Bezzia dia tianay ny hanome anao lakile vitsivitsy ahafahanay mampihena ireo isa ireo.
Ahena, ampiasaina indray ary avereno ampiasaina; Ny 3R dia mampiseho mazava amintsika ny làlana handrosoana amin'ny fanjifana tompon'andraikitra. Ny fampihenana ny fanjifana sy ny fampiasana indray ny fitaovana hialana amin'ny fanjifana loharano vaovao dia lakilen'ny fampihenana ny dian-tongotra ekolojika. Amin'ny toerana fahatelo dia ny fanodinana, izay nahazo làlana tamin'ny fahatsiarovan-tena ho antsika.
Tandremo habetsahan'ny fako vokarina ao an-tranontsika dia zava-dehibe ny fandraisana fanapahan-kevitra hitarika antsika any amin'ny fanjifana tompon'andraikitra bebe kokoa. Raha ny filazan'ny FAO, ny ampahatelon'ny sakafo novokarina hohaninay dia very na very maina eran'izao tontolo izao. Saingy ankoatr'ireo fako ireo dia misy hafa mifandraika izay mampiakatra ny kitapo fako ary azontsika ahena. Azontsika atao ihany koa ny miasa miaraka amin'ireo loharano lany ao an-tranontsika (rano, angovo ...). Ahoana? Manaraka ny fitsipiky ny 3Rs.
3 fanamboarana ny
ny vokatra sy loharano lany, manana fifandraisana mivantana amin'ireo fako vokarintsika. Ny fampihenana ny fanjifana ny entam-barotra sy ny angovo ao an-tranontsika noho izany dia fanalahidin'ny fampihenana ny dian-tongotra ara-tontolo iainana sy ny fanampiana amin'ny fanatsarana ny planeta.
Mamorona a menio isan-kerinandro manampy antsika hifehezana ny fividianana sakafo ary hampihenana ny habetsahan'ireo izay miafara amin'ny fako isan-kerinandro. Ny fitomboan'ny isan'ny fonosana koa dia mitondra antsika hanalavitra ny fihinanana maharitra. Ny fividianana betsaka, toy ny fanaontsika taloha, dia tompon'andraikitra bebe kokoa.
Ny fampihenana ny fanjifana angovo dia zava-dehibe toy ny fampihenana ny fanjifana entana. Aza manararaotra ny rafitra fanamafisam-peo sy fanamafisam-peo, ampiasao ny jiro fanavotana angovo ary fitaovana mahomby Ny kilasy A na ambony kokoa ary manao laharam-pahamehana ho an'ny bisikileta na fitateram-bahoaka dia safidy manampy amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana. Saingy tsy izay ihany no azontsika ampiharina amin'ny fanjifana maharitra.
Afaka ny ankamaroan'ny zavatra manamboatra na manova hanitatra ny fiainany mahasoa rehefa asehonay anao amin'ny entana amin'ny bisikileta. Raha azo atao, maninona raha araraotina izay rehetra lasa hadinon'ny olona? Noho izany dia mampihena ny habetsahan'ny fako isika ary tsy mandoto firy intsony.
Omeo izay tsy manompo anay amin'ny fampiroboroboana ny fahazoana entana faharoa io koa dia safidy maharitra. Azontsika atao koa ny mifanakalo vokatra, mandrisika ny fifanakalozana bizina eo amin'ny fiarahamonina misy antsika, raha toa ka mbola tsara tojo azy ireo izany.
Araka ny angon-drakitra avy any Ecoembes dia nanamboatra 1,3 tapitrisa Espana kaontenera taonina nandritra ny taona 2016. Fiaraha-monina izay mahalala bebe kokoa ny fanodinana sy ny filana manasaraka ireo fako vokarintsika, na dia mbola manana fisalasalana momba izany aza isika.
Ny famerenana indray anefa dia ny tsy mahomby firy ho an'ny tanjon'ny fihinanana maharitra. Ny famerenana amin'ny laoniny dia manova ny ankamaroan'ny fitaovana atsipintsika amin'ny vokatra vaovao; na izany aza, mandany angovo sy mandoto ny fizotrany izany, noho izany dia eo amin'ny toerana fahatelo izy.
Androany dia misy kaontenera ho an'ny karazan-vokatra rehetra, sokajina amin'ny loko:
Manga: taratasy sy baoritra. Kitapo taratasy, boaty baoritra, lahatahiry, baoritra, taratasy efa niasa, kaopy atody baoritra, kahie, gazety, magazine, valopy ...
Maitso: vera. Tavoahangy fitaratra misy loko, siny fihinanam-bilona, ​​siny fisakafoanana, kaontenera fitaratra na siny fitaratra toy ireo ho an'ny colognes na vokatra kosmetika.
Mavo: fonosana plastika sy vy. Ny kaontenera amidy eny amin'ny tsenan-pirenena izay fantatry ny marika teboka maitso fanta-daza. Ho fanampin'ireo kapoaka firavaka, amina soda na labiera, foil aluminium, lovia, sarony, satroka vy, kitapo sy kaontenera aliminioma, na kapoaka deodorant.
Volontany na volomboasary: ​​fako biolojika. Ny tavela amin'ny legioma sy biby, ary koa sela sy servisy efa niasa.
Grey na maitso mainty: fako amin'ny ankapobeny. Izay rehetra tsy azo averina namboarina: seramika sy tany, vera sy vera, fitaratra varavarankely sy fitaratra, famatrarana sy tampona, lambam-baravarana, taratasy fidiovana, taratasy maloto, sombin-tsakafo, taratasy laminaly, savoka, metaly, sary.
Mena: fako mampidi-doza. Ireo zavatra mandoto ny tontolo iainana toy ny batterie, bibikely, zavatra ara-teknolojia, aerosol, bibikely, solika, bateria sns.
Zava-dehibe tokoa ny fahalalana fa tsy maintsy mametraka ao anaty fitoeran-javatra tsirairay isika hoe inona tsy tokony apetraka mihitsy na inona na inona lozika mety ho fahitantsika. Kaomina maro no manolotra vaovao momba ireo lohahevitra ireo ary afaka mahita infografika an-tserasera marobe miaraka amin'ny fampahalalana marina izahay.
Ny fampihenana, ny fampiasana indray ary ny fanodinana dia ny lakilen'ny 3R a fihinanana maharitra sy tompon'andraikitra ao an-tranonay. Hatraiza no ampiharanao azy ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Ny 3R an'ny fanjifana tompon'andraikitra: ahena, ampiasaina indray ary avereno ampiasaina
Fomba fitafiana amin'ny mariazy hariva
Krim-boasary miaraka amin'ny crème whipped